Mapiritsi akanakisa ari pasi pe100 euros Nderipi rekutenga muna 2022?
Mugwaro iri tinovhara mahwendefa akanakisa pasi pe100 euros zvichibva pakuongorora kwehunyanzvi, kutengesa, mhando uye maonero evashandisi. Kunyangwe iyi imhando yemapiritsi ebhajeti akaderera, kune mahwendefa emutengo unofadza uyu yemhando dzausingazive kana mhando dzawanga usingade.
Asi zvakadaro kune isingasviki € 100 unogona kuwana yakanakisa mhando-mutengo sezvatinotaura mune iri gwaro, sezvo mune izvo zvisingasviki € 100 vagadziri vanofanira kucheka kumwe. Kana iwe uchiri kufarira piritsi isingasviki 100 euros, tevera ngano yatinopa yakanyanya kunaka mhando.
1 Kuenzanisa kwemapiritsi pasi pe100 euros
2 Mahwendefa asingasviki 100 euros
2.4 LNMBBS ine Android 9.0
3 Chii chekutarisira kubva pamapiritsi pasi pe100 euros
4 Zvakanakira uye zvakaipira kutenga yakachipa Android piritsi
5 Zvakakosha here kutenga piritsi yakadaro isingadhuri?
6 Ndepapi patinofanira kutenga piritsi ine isingasviki € 100?
6.1 Kune vana
6.2 Kana tisina mari
6.3 Kana tichichida pazvinhu chaizvo
6.4 Kana iwe uchida Chinese tablet
7 Akanakisa 100 € mapiritsi emhando
8 Ndezvipi zvimiro zvichave ne100 euro tablet?
8.1 Screen saizi
8.2 Huwandu hwe RAM uye kuchengetedza
9 Mhedziso uye kurudziro
Kuenzanisa kwemapiritsi pasi pe100 euros
Tablet 10 Inch-BENEVE...
Hwendefa 10.1 Inch ...
Tablet 10 Inch, ...
Iwe unoda here kuona mahwendefa ese ari pasi pe100 euros?
Ndiratidze mapiritsi akachipa kunze uko
Mahwendefa auchawana muchikamu chino ndeaya ane mitengo yakanaka kwazvo yemhando yavanopa. Kunyangwe mamodheru anoenderana nebhajeti iyi hatigone kubvunza mashura, takaona kuti pakushandisa zvakajairika, anokura zvakanaka, uye takaapatsanura pakati pemapiritsi manomwe negumi-inch.
Mahwendefa asingasviki 100 euros
Aya anotevera mahwendefa ari pakati pe7 ne10 inches ane mutengo wepasi pe100 euros atawana anonakidza uye ataizotenga. Kana iwe uchinyatsofarira iyi skrini saizi uye usinganetse kubhadhara zvimwe zvatinazvo kuenzanisa uku yemapiritsi 7-inch. Kana bhajeti yako iri pasi pe100 usanetseka, heano akanakisa eiyi bhajeti.
Chokwadi iyo modhi yatiri kubata nayo pano ndiyo yepedyo pamatehwe ese asingasviki zana euros. Iyo Huawei Mediapad T100 inopa chidzitiro chemhando uye chigadziriso chepamusoro kupfuura akawanda emamwe mahwendefa akatenderedza mutengo uyu. Zviri yakanakira vashandisi vanopa multimedia kushandiswa uye vanosarudza yakanaka skrini ine yakawanda processor kana piritsi remhando. Iyo ine 1024 × 600 pixel skrini iyo iri pamusoro peavhareji pabhajeti shoma.
ari HD mavhidhiyo anotaridzika zvakanyanya kujeka uye akapfuma mumavara zvichienzaniswa nemamwe mahwendefa ari pasi pe € 100 ane yakaderera mhando skrini. Izvi zvinowanzova nezvisarudzo zvakaderera pane zvinowanikwa mumuenzaniso uyu. Muviri wayo wepurasitiki unoita kuti inzwe kunge brittle, uye makobvu bezels anoita kuti iite senge makore mashoma apfuura, asi yakareruka uye inotakurika.
Kana iwe ukawana iyo piritsi yakanakisa pasi pe € 100 dhizaini yayo, saka zvauri kutsvaga chinhu chinoita senge iPad kana kuHuawei Mediapad T3 (iyi). Naizvozvo ine a dhizaini yemazuva ano (zvisinei nebezels) nevatauri vepamberi. Nokuda kwake compact kuyerwa uye kuratidzwa kwakajeka tablet iyi zvakare nyore kuverenga. La Huawei tablet Mediapad T3 inouya ne Android 7 iyo isiri kure neyakajairwa ruzivo rweiyi inoshanda sisitimu.
Padivi rehardware, ine Snapdragon 425 processor inokwanisa kubata mabasa ekutanga pasina matambudziko umo yatinowana kusevha internet, email, mafirimu, uye haina matambudziko kubata akasiyana siyana multitasking sarudzo. Tinogona kunyatso kutaura kuti Huawei Mediapad T3 yakatengwa zvakanyanya kune zvakatemwa zvainazvo uye pasina mubvunzo kutenga kunoyevedza . Nekudaro, kana iwe uchida kushandisa nharembozha yako kutamba mitambo yakawanda, pane zvirinani sarudzo dze mapiritsi ari pasi pe200 €.
Zvinhu zvakanaka: Slim uye slim dhizaini. HD skrini. Yakanyanya kukurumidza quad core processor. Yakanaka yemukati ndangariro zvakare expandable.
Zvinhu zvakaipa: Plastic dhizaini inonzwa yakachipa zvishoma
Pane isingasviki 70 euros, iyo Moto isarudzo inoyevedza uye iyo zvatengeswa zvizhinji kune vashandisi vanoda kugara vakatarisa zvavanoshandisa pahwendefa. Yakakwana kune avo vanoda piritsi rakachipa rinovapa mhinduro yakanaka mumabasa ekutanga sekuverenga, kubhurawuza kana kuona mavhidhiyo pachiratidziro chakakura kupfuura icho che smartphone.
Sezvo ichishanda neFire OS inoshanda sisitimu, yakanakira vashandisi veAmazon Prime, kuitira kuti iwe uchiri kutadza kuwana Google Play Store, vhezheni yemugadziri Amazon Store inopawo akawanda maapplication nemitambo saka iwe uchave nezvakawanda. Moto unopa a hunhu hwakatanhamara pamutengo wakaderera kuva nezvakadai zviri nani pane mahwendefa mazhinji pamutengo uyu.
Iine saizi yakasimba uye yakakora sikirini bezels, iyi iri pasi pe100 euro piritsi ine dhizaini inoita seyakare, sezvo iine chivakwa chatinofunga kuti chakaita sechishoma. Ipurasitiki shure kwayo yakaonda uye inokusiya uchinzwa zvakanaka kubatwa. Kunyangwe zvakadaro, inotsvedza zvishoma uye haina kukwana kubata, kunyangwe chiri chinhu chinogadziriswa nyore nekavha.
Yayo 7-inch skrini ine resolution ye1024 × 600 pixels uye ine imwe nhanho yekukwenya nekukwenya, kunyangwe zvakadaro. iri nani pane yapfuura Fire HD 6 modhi mupfungwa iyi. Iyo skrini ndeye HD uye ine dziviriro Girazi yeGorilla. Makona ekuona zvakare akatetepa uye ruvara rwakati zvishoma, kunze kwekuti kupenya hakuna kunaka kana uchizoishandisa kunze. Kunyange zvakadaro screen quality inofananidzwa nedzimwe sarudzo dzepiritsi pasi pe100 euros uye vazhinji vashandisi vanoiwana ichibudirira.
Kuwana zvishoma zvehunyanzvi, iyo Moto ine dhizaini yekumisikidza inosanganisira 1.3GHz Quad-Core processor, 1GB ye RAM uye 32GB yemukati ndangariro iyo. inogona kuwedzerwa ne microSD. Nepo mimwe mitambo yakatora nguva kurodha, kazhinji akapa basa riri nani pane raitarisirwa. Mapurogiramu ega ega nemitambo yekutanga yaimhanya zvakanaka kana chikwata, kureva kutsetsenura. Kunyangwe nemimwe mitambo inodakadza isu takanga tisina dambudziko, semuenzaniso neHearthstone. Nekuvaka kudiki, mutengo wakachipa uye anopfuura maawa manomwe ebhatiri, iyo Fire 7 ipiritsi rakanakisa kutanga naro risingadhure iwe mari yakawanda.
Zvinhu zvakanaka: Mutengo wakachipa. Kuvakwa kwakasimba. Hupenyu hwebhatiri. Inobvuma MicroSD kadhi.
Zvinhu zvakaipa: Kugadziriswa kwakaderera. Makamera haana kukosha zvakanyanya.
Kana iwe ukada chidzitiro chakati kurei, iwe zvakare une Fire HD 8 iyo zvakare iri nani zvishoma mune maficha
Hwendefa Moto HD 8 | ...
Pakutanga kwechinyorwa takati mamwe emapiritsi aya haakodzeri mari yakawanda kudaro nekuda kwekuti haasi kubva kumugadziri anozivikanwa. Zvisinei, munyaya iyi tine musiyano, kubvira Lenovo yakakwanisa kugadzira muenzaniso mukuru nekudzikisa mutengo zvakanyanya sezvinobvira. Hazvina kuoma kuwana Android piritsi isingasviki € 100. The trick ndeyekutsvaga imwe yakakodzera kushandisa pamutengo iwoyo. Nepo mazhinji eaya mahwendefa akachipa asina mazita echiChinese mhando, saka nyatso funga nezvesarudzo iyi.
Lenovo Tab E8 - Hwendefa ...
Tafura iyi haisisiri inopa zvese Sezvakaitika muzvizvarwa zvakapfuura, asi mukudzoka takawana 10,1-inch skrini ine IPS pani, LED backlighting uye resolution ye1024 × 600 pixels, yakakwana kutakura. Chii chimwe itete zvikuru pa8,9mm, chimwe chinhu chinotonyanya kusimba kune avo vasingadi kuchishandisa kuti vangove pamba. Inoshandisawo Android 8.1, nokutendeseka chimwe chinhu chinopfuura zvatingatarisira pamutengo uyu uye mamwe mamodheru anogona kutovandudzwa kune mavhezheni epamusoro.
Sezvaunonyatsoziva mukuenzanisa kwedu Mahwendefa gumi emasendimita iyo yakakura skrini, inodhura zvakanyanya mamodheru. Sezvo ivo vainewo nzvimbo yakawanda yekuisa Hardware kana bhatiri kuvandudzwa. Saka Pane modhi imwe chete yatinokurudzira piritsi repasi pe100 euros. Pane ese atakaedza, isu tinofunga kuti ndiyo yakanyanya kunaka uye ndiyo yaunofanira kufunga nezvayo.
LNMBBS ine Android 9.0
La mambokadzi mumutengo wemapiritsi ari pasi pe € 100. Iine hardware ine mwero uye yakapusa dhizaini. Nenzira imwecheteyo seyakapfuura mamodheru inogadzirwa nepurasitiki mumutsetse ine yakakora bezels yakatenderedza skrini, ichipa iyo. tsvaka chimwe chinhu chakura. Iyo 7-inch skrini ine resolution ye1280 × 800 pixels, iyo inopa chaiyo chaiyo chaiyo kuona marudzi ese emukati. Zvechokwadi, haisi yehutano hwakanyanya se IPS panels iyo inokosha zvikuru mune mamwe mahwendefa, asi muhwendefa isingasviki 100 euros chinhu chinoregererwa.
LNMBBS Android 9.0 Hwendefa ...
Mutengo wacho unoshamisa uye vashandisi vazhinji vakautenga sehwendefa rekutanga kana kunyange kuti vana vatange vane zvimwe zvakaitika navo. Kunyange zvakadaro, inofanira kutaurwa kuti inotambura kupenya zvishoma, izvo zvisingakurudzirwi kana iwe uchida kuishandisa muzuva. Kana zvasvika pakumhanya, ine Quad Core 1,30GHz processor inodarika zvakakwana kubata zviitiko zvemazuva ese sekutsvaga nekubhurawuza internet, mavhidhiyo, uye yakakosha Android mitambo. Yayo 4GB RAM haina kuderera, iyo isingadzikisi budiriro kana iwe uchida kuita zvakawanda.
Yayo yemukati inokwana 64GB kunyangwe mashoma emaGigabytes aya uye anouya ne Android 9.0 yakaiswa. Zvakadarowo microSD kadhi slots, uye nokudaro kukwanisa kuwedzera ndangariro yemukati. Sezvaungatarisira kubva pahwendefa rakachipa kudaro, mutauri ari kumashure idiki uye zvinokurudzirwa kushandisa mahedhifoni kana kutenga imwe yeaya akachipa maBluetooth speaker.
Kufanana nemamwe emamwe mahwendefa ari pasi pe100 euros atakaongorora, makamera ane hutsika husina kunaka uye haugone kutora chero mufananidzo unonyanya kujeka, pane chimwe chinhu chinowanzoitika. Kune rudzi urwu rwepiritsi, kuzvimiririra kunogamuchirwa pakati pemaawa matatu ne3 nekupenya kwakaiswa kunenge hafu. Ngatitii ipapo iyo LNMBBS piritsi rakashongedzerwa zvakakwana kuita mabasa ekutanga izvo zvakakosha mutengo waunawo kune avo vanoda kutanga kuyedza mahwendefa.
Zvinhu zvakanaka: Compact shape. Kurumidza kune imwe nguva. Hupenyu hwebhatiri hunogamuchirwa. Iwe unogona kuwedzera ndangariro yemukati. Pamitengo yakachipa yatakaona.
Zvinhu zvakaipa: Yakaderera ndangariro. Mutauri wekumashure akaipa. Sikirini ine makona nhete.
Iyi YOTOPT modhi ine 1.3GHz sere-core processor iyo, kunyangwe isingaratidzike muchikamu ichi, inopa zvakanakisa kushandisa piritsi kuona Facebook, social network, kutora manotsi, kuona YouTube mavhidhiyo uye kutamba yakajairika mitambo yevaraidzo. Nezve RAM, isu tiri pamberi pe4GB, saka zvakare tinogona kuita chimwe chinhu, asi isu hatigone kutarisira kushandisa zvine simba zvikumbiro.
Iyo ine mukati mukati me6GB, inova ndiyo yakajairika yatakakwanisa kuwana yemhando iyi yemapiritsi isingasviki € 100, asi panguva imwechete iyo chinhu chisina basa zvakanyanya sezvo iwe uchigona zvakare. isa kadhi kuti iwedzere ndangariro yayo uye nekudaro inokwanisa kuchengetedza akawanda mafaera, maapplication uye data zvakazara.
Chimwe chatinofanira kucherechedza ndechekuti pakutanga hatinzwisise kuti sei isina kuuya necharger, asi tikaigamuchira kuti tiiedze tinoona yaiswa, saka kana wanga waverenga yatova nyaya iwe. musafunganya nezvazvo.
Zvekare tinoona kuti nemapiritsi emitengo yakaderera zvakadaro unogona kuita zvinhu zvakakosha asi semuenzaniso haugone kutora mafoto nekamera, sezvo iwowo ari emhando yakashata, uye kunyangwe kuita imwe Skype haina kunyanya kukurudzirwa.
Zvinhu zvakanaka: Iine GPS uye ndangariro yemukati inogona kuwedzerwa. Kuvaka kunoenderana. processor. Bhatiri rinogara kwenguva yakakwana. Mutengo we10-inch skrini. Ine bluetooth.
Zvinhu zvakaipa: Iwo makamera maviri. Kanganwa nezve maapplication kana mitambo inoda simba rakawanda.
Uchiri mukukahadzika? Kana pasina modhi yakakupwisa kana kuti hausati wava nechokwadi chekuti ndeipi yekusarudza, mugwaro rinotevera isu tichakubatsira kusarudza piritsi rako, tinya bhatani:
Chii chekutarisira kubva pamapiritsi pasi pe100 euros
Mahwendefa akachipa haana kuipa, asi kune mamwe maitiro anotambura nemutengo. Zvisinei, ungashamisika kuona musiyano pakati pemahwendefa aya asingadhuri nemamwe anodhura. Kazhinji unongofanira kurangarira kuti vachave nazvo zvishoma zvishoma RAM uye dzimwe nguva (kwete nguva dzose) zvishoma zvishoma kugadzirisa. Iwe unogona kutarisira mhando imwechete yeflash memory muhwendefa yako yakachipa sehwendefa inodhura zvakapetwa kaviri kana katatu kubva kune inozivikanwa brand. Zvinonzwika zvakanaka? Chokwadi ndechekuti kana.
Midziyo iyi yakaderera pane matatu manhamba ndeyeavo vasina syndrome yekuda "yakanakisa piritsi, inokurumidza uye yazvino modhi" uye piritsi rinodhura anenge 80 euros rinogona kunge rakanakira. Unogona kuverenga, kuteerera mimhanzi, kuona mavhidhiyo, kutsvaga internet, uye kuita zvimwe chete zvinhu zvawaizoita neiPad kana imwe piritsi inodhura. Hongu, ivo vari nani asi isu tese tinoziva kuti mazana emaeuro avanodhura achabhadhara mucherechedzo. Kana iwe usinganzwe kudiwa kwekutamba mitambo yazvino, mapiritsi epamusoro ari pasi pe100 euros ndiwo ega aunoda pachigadzirwa chako.
Zvakanakira uye zvakaipira kutenga yakachipa Android piritsi
Pane chinhu chimwe chiri pachena kana tichitaura nezvemapiritsi akachipa uye ndechekuti vagadziri vakatofanira kucheka zvimwe zvinhu kuti vazvigadzire nemutengo wakanaka kudaro. Zvinhu zvakaipa zvinoonekwa patinotaura nezvazvo dhizaini, yakati dzikamei kuita uye yakaderera kugadzirisa. Kune rimwe divi, mapiritsi ari pasi pe100 euros anoshandiswa sanganisira zvimwe zvinhu mubhokisi.
Vamwe vane chimiro chakasiyana, skrini saver, uye kunyange zvese zviri zviviri. Zvakanaka sezvo mahwendefa anodhura anosanganisira chero chinhu kunze kwehwendefa uye zvakakosha. Izvi zvinodaro nekuti vagadziri vemapiritsi makuru vanoda kuti utenge zvese izvi zvakasiyana kuitira kuti ubhadhare zvakawanda.
Kunyangwe zvingave zvisina kunaka kutaura kuti mahwendefa akanakisa pamitengo iyi anogona kukwikwidza neakanyanya kuita, tinogona kutaura pachena kuti. kana iwe uchingoda kunakidzwa nemultimedia zvemukati uye kutarisa, enda mberi uye chengetedza mari yakawanda kutenga imwe yemapiritsi akachipa aya.
Isu takasarudza pakati peakanakisa mahwendefa akachipa, ayo asingasviki 100 euros, anonyanya kutengesa uye anonyanya kukoshesa. Tinoaisa mutafura inotevera pamusoro pekuenzaniswa.
Kana yasvika nguva yekutenga piritsi nyowani, tinogona kuona kuti kune yakakura siyana maererano nemitengo. Pakati pavo isu tinowana mapiritsi ane mitengo isingasviki 100 euros. Tichakuudza zvakawanda nezvemhando iyi yemapiritsi pazasi, kuti iwe ugone kuziva kana iri sarudzo inoenderana nezvauri kutsvaga.
Zvakakosha here kutenga piritsi yakadaro isingadhuri?
Uyu mubvunzo unowanzoitika kubva kune vashandisi. Sezvo mutengo wakaderera wakadaro unowanzo tumira mufananidzo kuti ipiritsi yehurombo. Kunyangwe izvi zvisiri izvo nguva dzose. Panogona kunge paine mapiritsi akanaka kwazvo emutengo wakaderera. Kunyangwe zvinoenderana nekushandiswa kwaunoda kuita.
Kune vashandisi vasingaronge kushandisa zvakanyanya piritsi ravo, uye vanoda kuti itambe, kutarisa kana kudhawunirodha maapuro nguva nenguva, zvingave zvisiri madikanwa kushandisa mari yakawandisa. Kana kana iwe uchida kutenga imwe yemwana, yekufamba uye yekuzorora. Muzviitiko izvi, tablet yakachipa ichaita kupfuura kuita basa rayo.
Naizvozvo, mune zvimwe zviitiko, iyo yakachipa piritsi inogona kunge iri yakanakisa sarudzo. Ichazadzisa zvakanaka izvo mushandisi anoda pasina kushandisa mari yakawandisa. Zvakare kune vanhu vazhinji vari pabhajeti, inogara iri sarudzo yekufunga nezvayo.
Ndepapi patinofanira kutenga piritsi ine isingasviki € 100?
Kune nguva dzose nhamba yemamiriro ezvinhu ayo anogona kuve nyore kutenga piritsi nemutengo wakaderedzwa seizvi, mamwe acho atotaurwa. Asi isu tichataura zvakawanda nezvenyaya yega yega pazasi.
Kana ukaronga kutenga imwe piritsi yevana Uye ndiyo piritsi yekutanga yaunoshandisa, zvingave nani kuenda kune chimwe chinhu chakachipa. Saka iwe uchadzidzira kuishandisa uye kana chimwe chinhu chikaitika, zvirinani haisi overspending. Mukuwedzera, muzviitiko zvakawanda, kana iwe ukatenga piritsi yemwana, inofanira kushandiswa paunenge uchifamba, uchiona mafirimu kana mavhidhiyo uye zvichida mumwe mutambo.
Kuti ushandise aya maficha, haufanirwe kushandisa mari yakawandisa pane modhi ine akawanda ekuwedzera maficha. Sezvo mari inobhadharwa kune chimwe chinhu icho pakupedzisira chisingazoshandiswi kana kushandiswa.
Kana tisina mari
Chimwe chinhu chinokosha zvikuru bhajeti yatinayo. Mahwendefa ane mitengo yakasiyana, asi vashandisi havagoni kugara vachitenga imwe 200 piritsi kana 400 euros. Naizvozvo, mune zvimwe zviitiko iwe unofanirwa kutenga piritsi nemutengo wakaderera, isingasviki 100 euros. Sezvo zviri nani kugadziridzwa kune bhajeti remunhu iyeye, pasina kutora mari yakawandisa.
Kana tichichida pazvinhu chaizvo
Kana isu tikasaronga kuishandisa zvakanyanya, zvinogona kugara zviri nyore kutenga piritsi rakachipa. Kuti uishandise kaviri munzira, kana kutarisa uye kuona dzakatevedzana nguva nenguva, haudi iyo inodhura modhi muchikamu chehwendefa.
Naizvozvo, vanhu vanoda kuve nehwendefa, asi vasingazoishandisa zvakanyanya, havafanirwe kushandisa mari yakawandisa pane imwe. Sezvo pakupedzisira vachave nekunzwa kuti vakakanda mari. Ipiritsi yakachipa, asi iyo inozadzisa chinangwa chayakatengerwa, ichava sarudzo huru. Kune isingasviki 100 euros iwe unogona kuona sarudzo dzakanaka.
Kana iwe uchida Chinese tablet
Kazhinji, mhando dzeChinese dzakachipa. Icho chinhu chinogona kuonekwa mumusika we-smartphone uye chatinoonawo mumahwendefa. Mitengo yemhando idzi yakadzikira pane yemhando zhinji. Naizvozvo, zvinokwanisika kuwana mhando dzakachipa kwazvo, asi nemaitiro akanaka.
Saka kana wafunga tenga piritsi rechiChinese, zvakanaka kurangarira izvi. Sezvo zvichikwanisika kuwana mhando nemitengo isingasviki 100 euros iyo ichapa kuita kwakanaka uye kuve yakakodzera kushandiswa kwakagadzirirwa iyo.
Akanakisa 100 € mapiritsi emhando
Zvinogoneka kutenga mahwendefa epakati pe € ​​100, uye ane saizi yakanaka uye maficha. Pamutengo uyu, mazhinji e mhando kazhinji maChinese, asi izvozvo hazvifaniri kureva unhu husina kunaka. Kune mamwe mamodheru ane zviyero zvakanaka, senge izvo zvemhando:
Haisi mhando inozivikanwa kwazvo, asi zvishoma nezvishoma iri kuramba ichizivikanwa nekuda kwekutaura kwakanaka kwairi kugamuchira. Kunyanya, iyi mhando yeChinese inopa mahwendefa e100 emhando yakanaka, yakanaka maficha, uye dhizaini yakanaka. Uye zvakare, iyo Hardware inowanzo sanganisira zvazvino zvikamu, pamwe neazvino shanduro yekushandisa masisitimu, ese Android uye Windows 10.
Tablet PC 2 mu...
Iyi imwe mhando yeChinese ine mhando dzakachipa kwazvo, isina zvinhu zvakawandisa zvinoshamisa, asi zvakakwana kuti zvishande uye zvinoshanda kune vazhinji vashandisi. Pamusoro pezvo, mapedziso avo ndeemhando, anowanzo sanganisira LTE yekubatanidza tekinoroji neDualSIM (chinhu chisingawanzo kuwanikwa mumapiritsi akachipa), FM radio, OTG, ruzha rwemhando, nezvimwe.
Vanopawo hutano hwakanaka uye mitengo yakaderera. Nezvimwe zvinhu zvinonakidza zvisingawanzo kuwanikwa mumamodeli emitengo yakafanana. Avo vakatotenga mamodheru kubva kukambani iyi yeChinese vane maonero akanaka, saka inogona kuve sarudzo yakanaka kana usingakwanise kushandisa yakawanda.
GOODTEL Hwendefa 10 ...
Ndiyo imwe yeaya maChinese brand asingazivikanwe zvakanyanya, asi anomira pachena achienzaniswa nemamwe mabhureki asingakupe iwe zvaunotarisira kubva kwavari. Mahwendefa avo asingasviki 100 euros kazhinji ane hardware ine mashandiro akanaka, shanduro dzemazuva ano dzeAndroid, USB OTG, mabhatiri ane kuzvitonga kwakanaka uye, chinhu chakanakisa, ndechekuti vanouya vakashongedzerwa zvakanyanya. Dzinowanzo sanganisira dziviriro, charger, mahedhifoni, peni yedhijitari, uye kiibhodhi yekunze sezvimwe zvekuwedzera.
Ndiyo imwe yeaya akachipa maChinese brands, asi pasina zvinoodza mwoyo maficha. Semuyenzaniso, ine mamwe mashoko anowanzova ega emapiritsi anodhura, senge USB OTG, IPS mapaneru ane yakanaka resolution, DualSIM yeLTE, yazvino vhezheni yeAroid, kana kuzvitonga kwakanaka.
Kana iwe usingavimbe nemamwe mabhureki asingazivikanwi, chii chiri nani pane kuva nemumwe weChinese tekinoroji hofori, anogara achikupa chivimbo chakawanda uye anovimbisa rubatsiro rwakanaka kana chimwe chinhu chikaitika. Iyi femu ine mitengo inoshamisa chaizvo, uye neyakajairwa premium maficha. Uye zvakare, iwe uchave neazvino tekinoroji, yakagadziridzwa sisitimu yekushandisa, uye yakanaka kwazvo dhizaini uye kupera. Iyo yakanakisa sarudzo kana iwe uri kutsvaga kuitamba yakachengeteka, pasina kusvetuka mune isingazivikanwe.
Aya mamwe mahwendefa eChinese anodhura asingasviki € 100 uye zvakare iri imwe sarudzo yauinayo pamunwe wako. Iine hunhu hwakanaka, inogamuchirika chidzitiro mhando, zvine mwero maficha, yakatsetseka kushanda kwayo sisitimu yekushandisa, mhando yeaudio, hupenyu hwakanaka hwebhatiri, uye zvese zvaungatarisira kubva pahwendefa remutengo uyu.
Ichi chinyorwa chekuSouth Korea chinozivikanwa nemapiritsi ayo ekutanga, ane mitengo yakakwira. Nekudaro, ivo vane modhi inokodzera iyo € 100, sezvakaita yakakosha Galaxy Tab A. Iyi 8 ”tablet inogona kuve imwe nzira huru kana iwe uchitsvaga iyo yakanyanya garandi uye chengetedzo maererano nekutenga. Tafura ine resolution ye 1280x800px, Qualcomm Snapdragon 429 quad-core processor, 2GB ye RAM, 32GB yekuchengetedza mukati, microSD card slot (kusvika 512GB), 8MP kumashure uye 2MP kumberi kamera, uye 5100mAh bhatiri rekuzvimiririra kwakanaka. Ehe, ine Android inokwidziridzwa neOTA.
Ndezvipi zvimiro zvichave ne100 euro tablet?
Paunenge uchitsvaga piritsi ine mutengo wepasi pe100 euros, zvimwe zvinhu zvinofanirwa kugara zvichitariswa. Chii chatingatarisira muchikamu chemusika ichi? Isu tinokuudza zvimwe nezve mamwe makuru maficha avachava nawo.
Sikirini saizi inosiyana mune izvi. Sezvo isu tichigona kuona mamodheru ane 10-inch skrini, kunyangwe zvakajairwa kuti kuve nevakawanda vane diki diki senge 7 kana 8 inches muhukuru. Saka zvinogoneka kuti mushandisi asarudze inovakodzera zvakanyanya. Iwe unofanirwa kufunga nezvekushandisa kwaunoda kuita.
Pamusoro pepaneru kunyanya, mazhinji ari IPS kana LCD. Sezvo zviri zvinhu zvakachipa, zvinodzivirira mutengo wekugadzira piritsi kubva kumusoro. Hunhu hunowanzo gamuchirwa, neHD kana Full HD resolution mune dzakawanda kesi. Kazhinji, vanokutendera kuti utarise mavhidhiyo kana mafirimu nenzira iri nyore pasina matambudziko akawandisa.
Huwandu hwe RAM uye kuchengetedza
Mune mahwendefa emhando isingasviki 100 euros iyo RAM kazhinji haina kunyanyokura. Zvakajairika ndezvekuti tinozviwana tine 1 GB kana 2 GB ye RAM. Ichi chinhu chatinofanira kufunga nezvacho zvichienderana nekushandiswa. Sezvo yakaderera huwandu hwe RAM zvinoreva kuti piritsi racho harina kugadzirira kuita akati wandei panguva imwe chete.
Saka kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chinogona kushandiswa mune mamwe mamiriro, zvingave nani kuva ne2GB ye RAM. Kune mamodheru ane huwandu uhu hwe RAM muchikamu ichi. Kunyange zvazvo kusarudzwa hakusi kwakakura. Saka hazvizogara zviri nyore kuwana piritsi rinoenderana nezvauri kutsvaga.
Nezvekuchengetedza, inogona kunge iri 8 kana 16 GB. Zvakare zvinoenderana nekugadzira uye modhi uye huwandu hwe RAM. Nekuti mune piritsi ine 2 GB ye RAM isu tinogara tine 16 GB yekuchengetedza mukati. Kunyangwe chinhu chinonyanya kukosha panyaya iyi mukana wekuwedzera nzvimbo yakataurwa kuburikidza ne microSD. Saka miganhu ishoma.
Iwo ma processors ari mumapiritsi anowanzo akafanana nea mu smartphones. Nokuda kwechikonzero ichi, mamodheru ari pakati nepakati uye akaderera pa Android ndiwo angangove achionekwa zvakare mumutengo wakaderera mahwendefa. Panyaya iyi, ivo vanogona kushandisa imwe kubva kuMediaTek, ayo anowanzo kuchipa zvakanyanya kupfuura Qualcomm's.
MediaTek processors inowanzoita shoma shoma kupfuura Qualcomm's. Kunyangwe iyo mhando yanga ichivandudza kwakawanda kumazinga ayo gore rapfuura. Saka iwe unogona kutarisira kuita kwakanaka zvakare pamapiritsi ane mitengo yakaderedzwa. Mamwe mabhureki anoshandisawo ma processor avo, ayo muzviitiko zvakawanda anovabvumira kuchengetedza mari.
Iyo kamera kana makamera anga achiwana kukosha mumapiritsi. Kunyangwe mune yakachipa mamodheru zvinogoneka kuti isu hatiwane kamera, kana kuti ine imwe chete yeaya maviri. Kana vaine makamera ese ari maviri, gadziriso inogara yakadzikira pane yatinayo mune mamwe mamodheru.
Saka kuti tigone tarisira makamera ari pakati pe2 ne5 MP. Nyore, iyo yekutora mafoto mune dzimwe nguva, asi hapana chimwe, haizove imwe yeakakosha maficha ehwendefa mupfungwa iyoyo. Kunyange zvichigara zvakanaka kuve nekamera, kana ichida kushandiswa pane imwe nguva. Asi isu hatingatarisiri kuti ivo vangave vakanaka pamusika.
Kuve yakachipa modhi ine mutengo usingasviki 100 euros, kazhinji mhando achashandisa zvinhu zvakaita sepurasitiki zvekunze. Purasitiki yakaoma, iyo ichakwanisa kuramba, kana imwe alloy. Asi ichi chinhu chinofanira kutarisirwa, kunyange zvakanaka kuziva kuti ichava sarudzo yemhando dzakawanda.
Sezvo nenzira iyi mari yekugadzirwa kwehwendefa yakaderera, iyo inobvumira kuti ive nemutengo wakaderera wekutengesa.
Zvakajairika kuti pave nemapiritsi anobvumira kushandiswa kweSIM. Asi mukati meichi chikamu chakachipa chemusika kusarudzwa kunogumira, kana zvisingaite kunge pasina. Saka vashandisi vachafanira sarudza imwe ine chete WiFi neBluetooth. Harisi dambudziko, nekuti vazhinji vanowanzosarudza mavhezheni aya. Asi zvakanaka kuziva kuti izvi ndizvo zvinogona kuwanikwa nemunhu.
Kana zviri zviteshi, vanowanzouya nehedhifoni jack uye imwe USB port. Sezvambotaurwa, zvakakoshawo kuti uve ne microSD slot. Saka kuti zvikwanise kuwedzera kuchengetedza.
Mhedziso uye kurudziro
Mahwendefa akachipa anokwezva pamutengo wavo, asi isu hatidi kuisa pangozi kutambisa mari pachidimbu chemarara emagetsi. Nokuda kwechikonzero ichi, usati wasarudza kusarudza imwe, zvakakosha kuita tsvakurudzo shoma pamusoro payo. Neraki iwe, takatoita uye tinokurudzira imwe yemapiritsi pamutengo wakanaka wakaratidzwa mukuenzanisa kwekare.
Iwe unozoziva kuti nekutenga piritsi rakachipa iwe urikubayira zvishoma zvesarudzo zvinowanikwa mumapiritsi ekupedzisira, asi izvi zvakasiiwa hazvidiwi. Unogona kuona mavhidhiyo, mimhanzi, mitambo, kutsvaga internet, kudhirowa kana ita zvinhu zvaungaite nemapiritsi anodhura. Nepo kushandisa mitambo inoda zvakanyanya kana maapplication anogona kukonzera kuzara, kuita kuti zviitwa zvataurwa zvive zvakanyanya mahwendefa asingasviki 100 euros achaenda sesilika, zvikasadaro, kana iwe uchida kushandisa zvishoma zvishoma isu tinokurudzira kuti utarise iyo yakanakisa piritsi ye200 euros.
Sezvauchaona pamusoro apa takanyora akanakisa uye akakosheswa zvakanyanya kuitira kuti iwe uwane zvakanyanya mari yauchashandisa. Kune rumwe rutivi zvakare zvipo zvakanakisa pasina kushandisa miriyoni. Unogona kuzviona muzvinyorwa zvakasiyana mumapepanhau akasiyana. Kana uine shamwari kana nhengo yemhuri inoda midziyo yemagetsi asi isina imwe, iyi inogona kunge iri Kisimusi yakanaka kana chipo chekuzvarwa.
Mahwendefa akadhura » Mutengo » Mapiritsi akanakisa ari pasi pe100 euros
8 makomendi pa "Akanakisa mapiritsi pasi pe100 euros"
2017-06-12 at 9:41 am
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwepeji. Zvinoita sekuti hauna zvakawanda asi tafura yave yakandinakira nekuti ndanga ndichifunga kupa imwe. Sezvo kune akawanda paInternet, zvave zvakanaka kwandiri kuti ndiite kuti vaonekwe pano hehe
2017-06-21 at 9:54 am
Hapana dambudziko Jose. Ikozvino tiri kushanda kuti tiite analytics yega yega kuitira kuti ruzivo rwuwedzerwe 😉
2017-06-13 at 8:07 pm
Thanks Pau! Rubatsiro rwakakura! Asi ndine mubvunzo… Kana tikaenzanisa kunaka kwenzwi… pane musiyano pakati pawo here? Ini ndinogara ndichiona akamisikidzwa akajairwa multimedia maitiro kana, kunyanya, skrini yekugadzirisa kana mhando yemufananidzo, asi zvakadini nemhando yekurira? Hazviwanzotaurwa here nekuti hapana misiyano mikuru? Ndiri mudzidzisi weChirungu akazvimiririra. Zviitwa zvekunzwisisa zvakakosha pamakirasi angu, pamusoro pekukwanisa kuvhura .pdf kana kutamba vhidhiyo pfupi…. Ndinoona zvakaoma kuwana chimwe chinhu chinoenderana nezvandinoda. Munokwanisa here kundibatsira?Ndatenda!!!
2017-06-14 at 8:21 am
Ndatenda nemhinduro Eihreann! Iwe wakaita a pfungwa yakanaka 😉 uye chokwadi ndechekuti iwe uri pachokwadi, ruzivo urwu haruna. Kana iri yemhando yeruzha, tinogona kuibatanidza zvishoma nemakamera, hazvina kunaka kuve nehwendefa rakachipa asi iro rinogona kufambiswa nekumwe kuyerera, saka hapana misiyano yakawanda pakati pavo.
Kana iwe uchida piritsi kuti ripe kushandiswa kwekudzidzisa, iwe uchada, sezvaunotaura, imwe ine simba uye inoyerera mutauri pahwendefa kuitira kuti irege kukusiya uchireva nhema. Rega ndikuitire mamwe mazano.
Kana uine bhajeti isingasviki € 300, zvitarise iwe pachako iyi samsung.
Kana iwe uine bhajeti isingasviki € 200 shanya kuenzanisa uku yandingakurudzira BQ Edison 3 umo vatauri vari nani zvishoma pane Zvisina kujairika.
Kana bhajeti yako yakatenderedza zana (ndosaka uri muchinyorwa chino ndinofungidzira hehe) ini ndinokuudza kuti uite zvinotevera: chingave chii kutenga piritsi raunoda usingatarise ruzha zvakanyanya asi ita shuwa kuti ine Bluetooth uye tenga mukurukuri anobatanidza Nenzira iyi, zvinoenderana nekuti iwe unogona sei kuwana zvakawanda kubva mairi. Zvingave zvandichaita sezvo zvinosuruvarisa kuti mahwendefa ari pasi pe100 € makamera / vatauri vanosiiwa zvakafanana parutivi.
Ndinovimba ndave nerubatsiro, Svondo yakanaka!
Iyo piritsi ingave yakanaka mumutengo uye mhando? ENERG SISTEM NEO 7. Tablet 7 ″, mutengo wayo i70 euros.
2017-06-15 at 9:10 pm
Handina kukwanisa kuzviyedza saka handikwanise kukuudza ... Zvinoenderana nekuti unoida nei asi kufunga nezvemhando-mutengo nekubhadhara zvakanyanya iwe unogona kuona. ichi chinyorwa izvo zvirokwazvo hazvikuodzi.
Paco, wakatiudza mwedzi mishoma yapfuura. Pakupedzisira takaongorora iyo energ sistem, hoyo unazvo. Luck
2017-06-14 at 9:55 pm
Ndatenda zvikuru, ruzivo ruchandibatsira zvakanyanya.